Yaa Suulaamaaxis (Laattuu Nageenyaa) deebi’i deebi’i akka si arginuuf deebi’i (Macaafa Weedduu Weedduu Caalu 7:1) – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
November 16, 2018 /in Tibbana /by MK-IT
Giiftiin keenya yeroo ijoollummaa Isheetti Ilma Ishee ijoollummaa Isheetti dubrummaan deesse waliin cubbuu tokko malee ari’atamtee gidiraa baayyee arguun Ishee adunyaa dinqisiisaa jiraata. Namni biraa yoo gidiraa arge cubbuu isaatiif gidiraa arge jedhama Giiftiin keenya garuu balleessaa tokko malee Ilma ishee Isa hunda uumeefi hundumaa raawwachuu danda’u baattee baqachuun Ishee adda Ishee taasisa. Qulqullichi Selemoon kana ilaaleeti kan inni “Deebi’i” Isheen jedhu. “Maddiiwwan Kee imimmaaniin dhiqamuun isaanii, lapheen Kee gara laafummaan guutame dhiphachuu fi gidiramuun isaa, hidhiin Kee dheebuu bishaaniin gogee argamuun isaa haa ga’u. Amma deebi’i. Boqodhu” isheen jedha. Haaluma raajii dubbatame kanaan Giiftiin keenya gaafa Saadasa bultii ja’aa (6), godaansa irraa deebitee bakka Qusquwaam jedhamu boqochuu (aara galfachuu) ishee yeroo itti yaadannu waan ta’eef nutis Hayyicha (Ogeessicha) Salamoon waliin “Yaa Giiftii deebi’i deebi’i” Isheen jenna. Yeroo darbe godaanuu Ishee; gidiraa arguu Ishee yaaduun kan gaddine hundi keenya amma immoo deebi’uu Ishee yaadnee gammadna.
Deebi’uun Giiftii keenyaa lubbuu keenya keessatti hiika baayyee qaba. Godaansa keessaa deebi’uu isheen abdiin keenya raawwateera, Ilmi ishee Iyyeruusaalemitti fannifamee adunyaa fayyiseera. Otuu Isheen Naazireetitti hin deebine ta’ee Gooftaan keenya Qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos dhiiga Isaa dhangalaasee nu hin fayyisu ture. Waan ta’eef deebi’uu Giiftii keenyaan raajiin dubbatame raawwateera. Qulqullichi Daawwitis dursee “Lafa galeessatti qoricha taasise.” Far. 73:12 jechuun Gooftaan keenya kan foon Isaa muree dhiiga Isaa dhangalaasee nuuf kennu giddu galeessa lafa kanaa Iyyeruusaalemitti ta’uu Isaa dubbatee ture waan ta’eef akka kun ta’uuf Giiftiin keenya gara Naaziretitti deebite.
Karaa biraatiin yommuu waa’ee deebi’uu Giiftii keenyaa dubbannu ergamaan, “Heeroodsi du’eeraatii haadha Isaa fi Mucicha fuudhii deebi’i.” jechuun ture kan Yoosefitti hime. Mat. 2:20. Bakka Heroodsi jiru, Isheen fi Ilmi Ishee hin jiran waan ta’eef, kana jedhe. Iyyeruusaaleem Giiftii keenya Dubroo Maariyaamiifi Ilma Ishee kan ari’attee yommuu Heroodsi lubbuun jiru yoo ta’u, deebitee kan argatte immoo erga Heroodsi du’ee dhumiinsi ilmaan namaa dhaabbatee booda dha. Dubroon Maariyaam nageenya barbaaddi. Bakka nagaan jiru isheen fi Ilmi Ishee ni jiraatu. Bakka Isaan jiranis nagaan jira. Bakka wal-irratti ka’uun, jeequmsi, diddaan, oftuulummaan fi wal tuffiin mo’atan garuu hin jaallatan. Kanaaf, akka isaan gara keenyatti deebi’aniif dirqama kanneen armaan olitti caqafaman kun nu irraa fagaachuu qabu. Ergamichis “Heroodsi du’eera hammeenyi badeera” Isheen jedhe. Har’as akkuma Herodis kanneen Giiftii keenya laphee isaanii keessaa ari’atanii hameenya isaaniitiin jireenya isaanii keessaa Ishee fageessan jiru. Namoonni akkasii kun amma akka Isheen gara laphee isaaniitti seentee jiraattu of sirreessanii laphee isaanii hammeenya irraa qulqulleessuu qabu. Oftuulummaa, hammeenyaa fi shakkii jireenya keenya keessaa fageessinee yoo Ishee waammanne Isheenis jaalalaa haadhummaa Isheetiin gara keenya dhuftee rakkoo keenya nuuf hiikti. Yoo of salphisnee gad of qabnee kadhanne kabaja Ishee nuuf ibsiti.
Yoo Isheen nu waliin hin jirtu ta’e keessi keenya qullaa ta’a. Kan Ishee laphee isaa keessatti keessummeesse fi Ishee jaallate garuu, Ilma Ishees argachuufi waliin dubbachuu danda’a. Akkuma Qulqullichi Gabri’eel dubbate Waaqayyo waan Ishee waliin jiruuf (Luq. 1:28) adda baasuun hin danda’amu. Yoo kana hubanne akka Isheen gara laphee keenyaatti deebitu yommuu yaadannu kan Ishee waliin jiru Kiristoosiinis nuuf fiddee deebite akka Isheen Ilma Ishee waliin walitti nu araarsitu yaaduudhaan malee.
Karaa biraa deebi’uu Giiftii keenyaa yommuu yaadannu gara jireenya keenyaatti deebinee ilaaluu qabna. Yeroon kun yeroo baqannaan Giiftii keenya haadha Waaqaa itti dhaabatu qofa otuu hin ta’iin jireenyi jibbisiisaan jireenya keenya keessatti mullatus yeroo inni itti dhaabatu ta’uu qaba. Lubbuun keenya isheen tokkummaa Waaqayyoo irraa, Gannata irraa baqattee turte gara qabeenyaa ishee isa duraatti gara Waaqayyoo, gara Gannataatti deebi’uu qabdi. Yeroon kun yeroo deebi’uudha. Kiristoos beenyaa kaffaleee waa’ee isheef du’eera waan ta’eef lubbuun keenya bishaan isa cinaacha Gooftaa ishee irraa maddeen cuuphamtee foon Isaa nyaattee dhiiga Isaas dhugdee hojii gaarii hojjechuutti cimtee dhaabbattee gara biyya ishee gara Gannataatti deebi’uu qabdi. Lubbuun rakkoo biyya hormaatti godaanuu beektu amma waan balbalichi isheef banameef haa deebitu. Har’a akka deebituuf balballi banameefi yommuu ishee eegu kanatti yoo haalaan fayyadamte Gannata seentee jireenya bara baraa gonfatti. Yoo akka waan yeroo godaansaa ishee hin fixatiinitti of lakkooftee didde garuu carra dhufe of duraa dabarsitee gidiraa bara baraatuu isheef ta’a. Lubbuun keenya gara ishee kamii akka taate of haa gaafannu. Lubbuun, Foonii fi Dhiiga Gooftaa, qalbii diddiirrannaa, hojii gaarii hojjechuu, walumaa gala kan eeyyama Waaqayyoo raawwachuu irraa adda baate turteen amma gara “Biyya Keetti” deebi’i haa jennu. Akka lubbuun keenya Waaqayyo waliin jiraachuu hawwitu akka isheen gara Waaqa keenyaatti deebitu itti haa himnu. Kanaafis Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen
Gargaarsi Waaqayyoo nurraa hin fagaatiin
WAREEGAMTOOTA SADAASA GUYYAA TOKKOO Dubbii fayyinaa Mana Kiristaana Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaatti